POS System | Happy Sales - POS Supply
အရင်ကဆို 🏪သင်တို့ရဲ့ဆိုင်ကို Customerတွေ စျေးဝယ်လာကြမယ်
လိုချင်တာတွေ ယူလာပြီးတဲ့အခါ ငွေရှင်းကောင်တာမှာ ပိုက်ဆံရှင်းကြတယ်
အဲ့မှာစတွေ့တာဘဲ... ကောင်တာထိုင်တဲ့ အရောင်းစာရေးမလေးမှာ ပစ္စည်းတွေစစ်ရတယ် Productတစ်ခုချင်းဆီရဲ့ စျေးတွေကို အလွတ်သိထားမှရမယ်
နောက်ဆုံး စုစုပေါင်းကိုတွက်ပြီး(🤯မှားတွက်ရင်ဒုက္ခ) ငွေပေးချေခိုင်းရမယ် ပြန်အမ်းရမယ်
နောက်ပြီး ဘောင်ချာစာရွက်ကြီးပေါ်မှာ မှင်ခံကြီးနဲ့ ရေးရသေးတယ်
ဒီလိုတွေ မဖြစ်ရလေအောင် POS System တစ်ခုက သင့်ရဲ့ဆိုင်ကို ကောင်းကောင်းကြီးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
POS - Point Of Sale System ဆိုတာ
သင်တို့ရဲ့ ကုန်စုံဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်တို့ အပြင် အခြား Retail Shop တွေမှာ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာစေပြီး အရောင်းအဝယ်ဆိုင်ရာ စာရင်းများ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ ပက်သတ်သမျှ Dataအချက်အလက်တွေအားလုံးကို POS Softwareထဲမှာ ထည့်သွင်းမှတ်သားပြီး စနစ်တကျ ပြန်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ Systemတစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။
🖥️POS System သုံးရင် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရမှာလဲ?
1. စာရင်းများ တိကျမှန်ကန်ခြင်း📑
ငွေပေးချေတဲ့အခါမှာ Productပေါ်က Barcodeလေးကို Scanဖတ်လိုက်တာနဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစား စျေးနူန်းတွေကို တိတိကျကျမှန်မှန်ပေါ်လာတဲ့အတွက် Cashierလေးတွေ စာရင်းမှား စျေးနူန်းမှားမှာ မပူရတော့ပါဘူး၊ စာရင်းအင်းတွေ မလွဲတော့ဘူးပေါ့။
2. လုပ်ငန်းမြန်ဆန် သွက်လက်ခြင်း🛒
Productမှာပါတဲ့ Barcodeလေးကို Scanဖတ်လိုက်တာနဲ့ စျေးနှုန်းကို ချက်ချင်းသိနိုင်သလို စုစုပေါင်းသင့်ငွေ ကိုလည်း ချက်ချင်းတွက်ပြီးသား၊ အရင်လိုဂဏန်းပေါင်းစက်ကြီးကိုင်ပြီး တတောက်တောက်နှိပ်နေစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ စျေးရောင်းရတာ ပိုမြန်တာပေါ့
Customerတွေလည်း ငွေရှင်းဖို့ စောင့်နေစရာ မလိုတော့ဘူး‌လေ။
3. ထိရောက်စွာ လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း📊
POS Systemတွေဟာ တစ်နေ့စာ၊ တစ်ပတ်စာ၊ တစ်လစာ အရောင်းစာရင်းတွေကို ကြည့်နိုင်မယ်၊ ပစ္စည်းလက်ကျန် အဝင်အထွက်ကအစ အားလုံးကို ပြန်ကြည့်နိုင်တာဆိုတော့ မှန်ကန်တဲ့ စာရင်း အချက်အလက်တွေကို အသုံးချပြီးအရင်ကထက် လုပ်ငန်းကို ပိုမိုထိရောက်အောင် စီမံခန့်ခွဲလာနိုင်တာ‌‌ပေါ့။
Computerရှိမှ သုံးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး... Tablet၊ ဖုန်းစတဲ့ Portable Device လေးတွေနဲ့လည်း ဘယ်နေရာမှာမဆို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆိုင်သေးသေးလေးတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ဆိုင်ရှင်တွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိ Customerတွေအတွက်လည်း အကျိုးရှိသလို ငွေရှင်းကောင်တာက ၀န်ထမ်းလေးတွေကိုလည်း အများကြီး အထောက်အကူပြုတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါနော် ...